ညအချိန်မှာ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်စက်ခြင်းကို ရယူနိုင်ရန်Love - MyanmarMagazine
ညအချိန်မှာ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်စက်ခြင်းကို ရယူနိုင်ရန်Love
အိပ်မပျော်လို့ အိပ်ပျော်မယ့်နည်းလမ်းတွေကို စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် ညနေခင်းနေထိုင်ပုံတွေက အိပ်မပျော်စေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်။
အိပ်ချိန်ရောက်ခါနီးအချိန်မှာ လုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေက အိပ်တဲ့အခါမှာ အကျိုး သက်ရောက်မှုရှိစေပါလိမ့်မယ်။ စိတ်တွေ ရှုပ်ထွေးနေတာ၊ ဒေါသထွက်နေတာ၊ ပြီးတော့ တွေးနေတဲ့ အတွေးတွေက စိတ်ကို နိုးကြားစေပါတယ်။ ပြီးတော့ အိပ်ချိန်မတိုင်ခင် စိတ်ကိုလုံလောက်စွာ အနားယူခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်း အိပ်ပျော်စေနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ အိပ်ပျော် ဖို့အတွက် ညနေခင်းနေထိုင်ပုံတစ်ခုကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရင်တော့ ခေါင်းအုံးနှင့် ထိတွေ့လိုက်ချိန်မှာ ပိုမိုစိတ်အပန်းဖြေစေ နိုင်မှာပါ။ အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါ ခံစားနေရသော လူသန်းပေါင်းများစွာထဲက တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ လျှင်မြန်စွာအိပ်ပျော်စေနိုင်မယ့် အပြုအမူ(၁၀)ချက်ကိုဖတ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အိပ်စက်ခြင်းကို အရယူလိုက်ပါ။
၀၁. အိပ်ချိန်နီးကပ်လာရင် အစားအသောက်ကို အလွန်အကျွံမစားသောက်ပါနဲ့။
အိပ်ချိန်နီးကပ်လာချိန်တွင် အစားအသောက်ကို အလွန်အကျွံစားသောက်မယ်ဆိုရင် စားသောက်လိုက်တဲ့ အစား အသောက်တွေဟာ အစာအိမ်ထဲမှာ စုပုံသွားပြီး လဲလျောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အစာချေဖို့အခက်အခဲဖြစ်သွားပါ လိမ့်မယ်။ ညဘက်တွေမှာ အစာမကြေဖြစ်ခြင်းကနေ ကင်းဝေးစေအောင် အိပ်ရာမ၀င်ခင် အနည်းဆုံး၃နာရီစောပြီး စားသုံး ရမယ့် အဓိကအစားအသောက်တွေကို ဦးစားပေးစားသုံးပေးရမှာပါ။
၀၂. ညနေဘက်တွင် မီးအလင်းရောင်ကို မှိန်ထားပါ။
ဒီနည်းလမ်းလေးက ရိုးရှင်းပေမယ့် ညအချိန်မှာ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေဖို့အတွက် အသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်း လေးပါ။ မှောင်လာတဲ့အချိန်မှာ ခန္ခာကိုယ်က အိပ်ပျော်စေနိုင်တဲ့ဟော်မုန်းတစ်မျိုး (melatonin)ကို ထုတ်ပေးပြီး အိမ်ထဲမှာ မီးအလင်းရောင်တွေ လင်းထိန်နေမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ့ဟော်မုန်းကိုမထုတ်လွှတ်နိုင်တော့တဲ့အတွက် အိပ်ချိန်မှာ အိပ်ပျော်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေစေမှာပါ။ ညနေခင်းပိုင်းမှာ မီးရောင်ကိုမှိန်းထားပေးခြင်းဖြင့် ခန္ခာကိုယ်က အိပ်ချိန်နီးလာပြီဆိုတာကို သိလာစေမှာပါ။
၀၃. ကွန်ပျူတာတွေ၊ tablets တွေကို ပိတ်ထားပေးပါ။
ညအချိန်မှာ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေဖို့အတွက် နောက်ထပ်နည်းလမ်းလေးကတော့ computer တွေ၊ tablet တွေကို ပိတ် ထားပေးပါ။ Computers၊ tablets မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ backlit screens မှန်အမျိုးအစား တွေက melatonin ထုတ်လွှတ်မှုကို ပြိုကွဲစေပြီး Kindles မှာပါတဲ့ မှန်မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားကတော့ သိပ်ပြဿနာ မရှိပေမယ့် စံချိန်မှီစွာ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့ မှန်မျက်နှာပြင်ကတော့ ဦးနှောက်ကို လှုံ့ဆော် ပေးသလို အိပ်မပျော်အောင် လုပ်ပေးပါတယ်။ အိပ်ချိန်မတိုင်ခင် အနည်းဆုံးတစ်နာရီခွဲမှာ computers၊ tablets ကို သုံးခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်လိုက်ခြင်းဟာ ပိုမို အိပ်ပျော်စေမှာပါ။
၀၄. ကဖင်းဓာတ်ပါသော အစားအစာကို မစားသုံးပါနဲ့။
ကဖင်းဓာတ်ရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်မှုဟာ ထင်ထားတာထက်ကို ပိုကြာနိုင်တယ်နော်။ ၆နာရီမှာ ကော်ဖီသောက်လိုက်ရင် အိပ်မပျော်အောင် မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကဖင်းဓာတ်က ဦး နှောက်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုစနစ်မှာ မနက် ၁နာရီအထိရှိနေမှာပါ။ နေ့လည် ၂နာရီလောက်ကနေ ဘယ်လိုကော်ဖီကိုမှ မ သောက်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပြီး ခန္ခာကိုယ်ထဲကနေ ကဖင်းဓာတ်တွေ ထွက်သွားဖို့အတွက် အ ချိန်အများကြီးပေးရာလည်း ရောက်ပါတယ်နော်။
၀၅. ပဿနာအကုန်လုံးကို စာရင်းချရေးပါ။
ညစ်နေတဲ့အတွေးတွေက ညအချိန်မှာ အိပ်မပျော်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီ့လိုရေးတာက အ ရမ်းအကူအညီဖြစ်မှာပါ။ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကို စာရင်းလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်အတွေးထဲမှာ ရှုပ်ထွေး နေတဲ့အတွေးတွေကို စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သွားမှာပါ။ အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ အရာအားလုံး ထိန်းချုပ်ထားပြီဆိုတာကို သိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေနိုင်မှာပါ။
၀၆. အပူချိန်ကို လျှော့ထားပါ။
ညအချိန်မှာ အိပ်ပျော်စေနိုင်မယ့် နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ အပူချိန်ကို လျှော့ထားခြင်းပါပဲ။ ကိုယ်ခန္ဓာဟာ အိပ်ချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင် ကိုယ်ခန္ဓာအပူချိန်ကို လျှော့ချပေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပေးတယ်နော်။ အိပ်ခန်းနှင့် ဧည့်ခန်းမှာရှိတဲ့ အပူပေးစက်ရဲ့အပူချိန်ကို လျှော့တာဖြစ်စေ၊ ပြတင်းပေါက်ကိုဖွင့်တာဖြစ်စေ လုပ်ပေး ထားပါ။ ညနေခင်းတွေမှာ အေးမြမှုကို စတင်ခံစားလာရပြီဆိုရင် ကိုယ်ခန္ဓာက အလိုအလျောက် စတင်အိပ် ပျော် သွားပါလိမ့်မယ်။
၀၇. အကြောဆန့်လေ့ကျင့်ခန်းကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုလုပ်ပါ။
အိပ်ချိန်မတိုင်မီ အလွန်အမင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာ နှလုံးခုန်နှုန်းကို မြင့်တက်စေပြီး အိပ်မပျော်စေ ခြင်းကို ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်တစ်ခုပါ။ သို့ပေမယ့် ပေါ့ပါးတဲ့အကြောဆန့် လေ့ကျင့် ခန်းလေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကြွက်သားများကို ဖြေလျှာ့စေပြီး အိပ်ပျော်စေပါလိမ့်မယ်။ မအိပ်ခင်မှာ အကြော့လျှော့ လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်လုပ်ပေးလိုက်ရင် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုမိုလန်းဆန်းကာ အပန်းဖြေစေပါတယ်နော်။
ညနေခင်းတွေမှာ ရေနွေးဖြင့်ရေချိုးပေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာဟာ လန်းဆန်းပေါ့ပါးသွားပြီး အိပ်ပျော်နိုင်တယ်နော်။ အိပ် ချိန်မတိုင်ခင် ၁နာရီလောက်မှာ ရေနွေးဖြင့်ရေချိုးလိုက်ရင် ကိုယ်ခန္ဓာဟာ အေးမြသွားစေပြီး အိပ်ပျော် စေနိုင်တဲ့ဟော်မုန်း တစ်မျိုး (melatonin) ထုတ်လွှတ်ပေးတာကြောင့် ပေါ့ပါးပြီးအိပ်ပျော်စေပါတယ်နော်။ အဲဒီလိုမျိုး အကျိုး ထိရောက်ဖို့ နာရီဝက်ခန့်ကြာအောင် ရေချိုးပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါမှသာ ကိုယ်ခန္ဓာအပူချိန်မြင့်တက်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လေ။
ကလေးအရွယ်မှာ အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်က အိပ်ပျော်အောင်ကူညီပေးသလို အရွယ်ရောက်ချိန်မှာလည်း အလားတူဖြစ်ပါပဲ။ ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ထဲမှာ နစ်မျောနေခြင်းအားဖြင့် လက်တွေ့ဘ၀ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရ တဲ့ စိတ်ခံစားချက်များကို မေ့ပျောက်သွားစေပြီး စိတ်ကိုဖြေလျော့စေပါတယ်နော်။ ၂၀မိနစ်လောက်စာဖတ်ပေးခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်တဲ့အိပ်စက်ခြင်းကို ရရှိစေ ပါလိမ့်မယ်။
၁၀. ညနေခင်းတွေမှာ အရက်သောက်တာကို ရှောင်ပါ။
အရက်သောက်ခြင်းသည် ထုံထိုင်းစေပြီး အိပ်ပျော်စေနိုင်တဲ့အရည်အသွေးတွေကို လျှော့ကျစေပါ တယ်နော်။ ညနေခင်းတွေမှာ အရက်သောက်မယ်ဆိုရင် ညင်သာစွာအိပ်စက်စေနိုင်ပေမယ့် ညအချိန်မှာတော့ နိုးထလာစေပါတယ်လေ။ ညဘက်မှာ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ။ ဘယ်နည်းလမ်းက အကောင်း ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ပါဦးနော်။ နေ့စဉ်ဘ၀လေးတွေကို လှပစွာ ဖြတ်သန်းကြပါစို့!